၆ ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲကို ရတနာပုံနဲ့အတွေ့မှာ ဟံသာဝတီရယူနိုင်မလား? | FOX Sports Myanmar
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် | ဖေ‌ဖျောဝါရီ 14, 2020
၆ ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲကို ရတနာပုံနဲ့အတွေ့မှာ ဟံသာဝတီရယူနိုင်မလား?
ဒီတစ်ပတ်မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲအဖြစ် ရှိနေတာက ပဲခူးမှာကစားမယ့် ဟံသာဝတီ နဲ့ ရတနာပုံတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းကြီး ၂သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံဆုဖလားအတွက် မျှော်လင့်ချက်အားကောင်းနေတဲ့ ဟံသာဝတီအနေနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ရတနာပုံကို အနိုင်ရဖို့ အားထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ပွဲတစ်ပွဲသာရရှိထားပြီး ရလဒ်တွေညံ့နေတဲ့ ရတနာပုံအတွက်လည်း နိုင်ပွဲပြန်ရှာရမှာဖြစ်လို့ အကြိတ်အနယ်ကစားကြမယ့်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအနေအထားတွေအရဆိုရင် ဟံသာဝတီက အပေးအသင်းဖြစ်နေပြီး ရတနာပုံကတော့ အောက်အသင်းအဖြစ်လို့သာ ယူဆရမှာပါ။
Highlights – Sport-Club Freiburg vs 1. FSV Mainz 05
ဟံသာဝတီက ဒီရာသီမှာ ၅ ပွဲစလုံးအနိုင်ရထားပြီး ရမှတ်အပြည့်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေတာပါ။ ရဂိုးကလည်း ၁၄ဂိုးရှိနေသလို ပေးဂိုးက ၂ဂိုးသာပေးထားရပါတယ်။ ဒါက ဒီရာသီနေရှင်နယ်လိဂ်မှာ ရဂိုး၊ပေးဂိုးကွာဟချက် အကြီးမားဆုံးအသင်းအဖြစ်ရှိနေသလို ပေးဂိုးအနည်းဆုံးဒုတိယအသင်းအဖြစ်နဲ့လည်း ရှိနေတာပါ။ တစ်ဖက်မှာတော့ ရတနာပုံက တစ်ပွဲသာအနိုင်ရထားပြီး ၂ပွဲသရေ၊ ၂ပွဲရှုံးထားပါတယ်။ ရဂိုး ၆ ဂိုး၊ ပေးဂိုး ၇ဂိုးရှိနေလို့ -၁ တောင်ပြနေတာပါ။ ရတနာပုံက အရင်အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်သာ အသင်းကြီးလို့ သတ်မှတ်
နေရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ စုဖွဲ့မှုက အသင်းကြီးတစ်သင်းအနေအထားကနေ ယုတ်လျော့နေတာပါ။
ဦးမျိုးမင်းထွန်းလက်ထက်မှာ ဟံသာဝတီက အသင်းလိုက်ကစားအားကောင်းကောင်းကို အခြေတည်ထားတာပါ။ ပြည်တွင်းကစားသမားတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးကစားသမားရှားပါးနေပေမယ့် နားလည်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ကစားနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားသားကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ အီမီကာနဲ့ ဒေါ်နယ်ဘစ်ဆာတို့ကလည်း ခြေစွမ်းပြနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရလဒ်တွေကောင်းနေပြီး နိုင်ငံခြားသားတိုက်စစ်နှစ်ဦးက ၁၂ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးထားလို့ ရလဒ်တွေက ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ရတနာပုံက ပြည်တွင်းကစားသမားတွေနဲ့ပဲ ဆက်လက်ကစားနေတာဖြစ်ပြီး အောင်သူနဲ့ ၀င်းနိုင်စိုးတိုက်စစ်အတွဲက အလုပ်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကွင်းလယ်ပိုင်းကလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်မှုအားနည်းနေပြီး အသင်းကြီးတွေ၊ မာမာထန်ထန်ကစားနိုင်တဲ့အသင်းတွေနဲ့ဆိုရင် အခက်ကြုံလေ့ရှိပါတယ်။
ကစားရမှာကလည်း ဟံသာဝတီရဲ့ကွင်းဖြစ်လို့ ရတနာပုံအတွက်မလွယ်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအရဆိုရင်လည်း ဟံသာဝတီက ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အထိကို အားထည့်ကစားနေတာဖြစ်ပြီး ဦးမျိုးမင်းထွန်းကလည်း အသင်းကိုအကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရတနာပုံက အသင်းလိုက်ကစားပုံအားလျော့သွားရင် ရလဒ်တွေဆိုးရွားတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့မှုနှစ်ကြိမ်မှာလည်း ဟံသာဝတီက တစ်ပွဲနိုင်ခဲ့ပြီး သရေတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုအရ ဟံသာဝတီက အသာရရှိခဲ့သလို လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းအရဆိုရင်လည်း ရတနာပုံတို့ အဝေးကွင်းမှာ ယှဉ်မရလောက်ပါဘူး။ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်မှာတော့ အိမ်ကွင်းမှာကစားရမယ့် ဟံသာဝတီတို့ပဲ နိုင်ပွဲယူပြီး ၆ ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရလဒ်နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေဦးမယ်လို့ ယူဆမိကြောင်းပါ။
ဒီတဈပတျမွနျမာနရှေငျနယျလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံးပှဲတဈပှဲအဖွဈ ရှိနတောက ပဲခူးမှာကစားမယျ့ ဟံသာဝတီ နဲ့ ရတနာပုံတို့ရဲ့ပှဲစဉျဖွဈပါတယျ။ အသငျးကွီး ၂သငျးထိပျတိုကျတှဆေုံ့နတောဖွဈပွီး ခနျြပီယံဆုဖလားအတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြအားကောငျးနတေဲ့ ဟံသာဝတီအနနေဲ့ အိမျကှငျးမှာ ရတနာပုံကို အနိုငျရဖို့ အားထုတျရမှာဖွဈပွီး နိုငျပှဲတဈပှဲသာရရှိထားပွီး ရလဒျတှညေံ့နတေဲ့ ရတနာပုံအတှကျလညျး နိုငျပှဲပွနျရှာရမှာဖွဈလို့ အကွိတျအနယျကစားကွမယျ့ပှဲစဉျလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိအနအေထားတှအေရဆိုရငျ ဟံသာဝတီက အပေးအသငျးဖွဈနပွေီး ရတနာပုံကတော့ အောကျအသငျးအဖွဈလို့သာ ယူဆရမှာပါ။
ဟံသာဝတီက ဒီရာသီမှာ ၅ ပှဲစလုံးအနိုငျရထားပွီး ရမှတျအပွညျ့နဲ့ အမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျနတောပါ။ ရဂိုးကလညျး ၁၄ဂိုးရှိနသေလို ပေးဂိုးက ၂ဂိုးသာပေးထားရပါတယျ။ ဒါက ဒီရာသီနရှေငျနယျလိဂျမှာ ရဂိုး၊ပေးဂိုးကှာဟခကျြ အကွီးမားဆုံးအသငျးအဖွဈရှိနသေလို ပေးဂိုးအနညျးဆုံးဒုတိယအသငျးအဖွဈနဲ့လညျး ရှိနတောပါ။ တဈဖကျမှာတော့ ရတနာပုံက တဈပှဲသာအနိုငျရထားပွီး ၂ပှဲသရေ၊ ၂ပှဲရှုံးထားပါတယျ။ ရဂိုး ၆ ဂိုး၊ ပေးဂိုး ရဂိုးရှိနလေို့ -၁ တောငျပွနတောပါ။ ရတနာပုံက အရငျအောငျမွငျမှုတှကွေောငျ့သာ အသငျးကွီးလို့ သတျမှတျ
နရေပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ခွစှေမျးနဲ့ စုဖှဲ့မှုက အသငျးကွီးတဈသငျးအနအေထားကနေ ယုတျလြော့နတောပါ။
ဦးမြိုးမငျးထှနျးလကျထကျမှာ ဟံသာဝတီက အသငျးလိုကျကစားအားကောငျးကောငျးကို အခွတေညျထားတာပါ။ ပွညျတှငျးကစားသမားတှထေဲမှာ နာမညျကွီးကစားသမားရှားပါးနပေမေယျ့ နားလညျမှုကောငျးကောငျးနဲ့ကစားနိုငျပွီး နိုငျငံခွားသားကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ အီမီကာနဲ့ ဒျေါနယျဘဈဆာတို့ကလညျး ခွစှေမျးပွနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ရလဒျတှကေောငျးနပွေီး နိုငျငံခွားသားတိုကျစဈနှဈဦးက ၁၂ဂိုးအထိ သှငျးယူပေးထားလို့ ရလဒျတှကေ ကောငျးနခေဲ့ပါတယျ။ ရတနာပုံက ပွညျတှငျးကစားသမားတှနေဲ့ပဲ ဆကျလကျကစားနတောဖွဈပွီး အောငျသူနဲ့ ဝငျးနိုငျစိုးတိုကျစဈအတှဲက အလုပျမဖွဈသေးပါဘူး။ ကှငျးလယျပိုငျးကလညျး ဖနျတီးပေးနိုငျမှုအားနညျးနပွေီး အသငျးကွီးတှေ၊ မာမာထနျထနျကစားနိုငျတဲ့အသငျးတှနေဲ့ဆိုရငျ အခကျကွုံလရှေိ့ပါတယျ။
ကစားရမှာကလညျး ဟံသာဝတီရဲ့ကှငျးဖွဈလို့ ရတနာပုံအတှကျမလှယျပါဘူး။ စိတျဓာတျပိုငျးအရဆိုရငျလညျး ဟံသာဝတီက ခနျြပီယံဖွဈဖို့အထိကို အားထညျ့ကစားနတောဖွဈပွီး ဦးမြိုးမငျးထှနျးကလညျး အသငျးကိုအကောငျးဆုံးလှုံ့ဆျောပေးနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ရတနာပုံက အသငျးလိုကျကစားပုံအားလြော့သှားရငျ ရလဒျတှဆေိုးရှားတတျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခဲ့မှုနှဈကွိမျမှာလညျး ဟံသာဝတီက တဈပှဲနိုငျခဲ့ပွီး သရတေဈပှဲဖွဈခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးတှဆေုံ့မှုအရ ဟံသာဝတီက အသာရရှိခဲ့သလို လကျရှိခွစှေမျးပိုငျးအရဆိုရငျလညျး ရတနာပုံတို့ အဝေးကှငျးမှာ ယှဉျမရလောကျပါဘူး။ ဒီတဈပတျရဲ့ အကောငျးဆုံးပှဲစဉျမှာတော့ အိမျကှငျးမှာကစားရမယျ့ ဟံသာဝတီတို့ပဲ နိုငျပှဲယူပွီး ၆ ပှဲဆကျတိုကျအနိုငျရလဒျနဲ့ အမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျနဦေးမယျလို့ ယူဆမိကွောငျးပါ။
Home Football Myanmar National League ၆ ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲကို ရတနာပုံနဲ့အတွေ့မှာ ဟံသာဝတီရယူနိုင်မလား?